Amabali EBhayibhile: UYesu Uvukile - IWebhsayithi Esemthethweni YamaNgqina KaYehova
UYALAZI na eli bhinqa nala madoda mabini? Eli bhinqa nguMariya Magadala, umhlobo kaYesu. Yaye amadoda anxibe ezimhlophe ziingelosi. Eli gunjana akrobe kulo uMariya yindawo owawubekwe kuyo umzimba kaYesu emva kokufa kwakhe. Kuthiwa lingcwaba. Kodwa ngoku umzimba awukho! Uthathwe ngubani? Masibone.
Emva kokufa kukaYesu, ababingeleli bathi kuPilato: ‘Xa uYesu wayesaphila wathi uya kuvuswa emva kweentsuku ezintathu. Khupha umyalelo wokuba ingcwaba linqatyiswe. Ngoko abafundi bakhe abanakuwuba umzimba wakhe baze bathi uvusiwe kwabaﬁleyo!’ UPilato uxelela ababingeleli ukuba bathumele amajoni ukuba aligcine linqabisekile ingcwaba.
Kodwa kwakusasa ngosuku lwesithathu emva kokufa kukaYesu ngequbuliso kuﬁka ingelosi kaYehova. Iyaliqengqa ilitye ilisuse engcwabeni. Amajoni oyika gqitha kangangokuba awakwazi nokushukuma. Ekugqibeleni xa ekhangela engcwabeni, umzimba awukho! Amanye ala majoni aya esixekweni aze axelele ababingeleli. Ngaba uyazi ukuba benza ntoni aba babingeleli bangendawo? Bahlawula amajoni ukuba axoke. Bathi kumajoni: ‘Yithini abafundi bakhe baﬁke ngobusuku silele, bawuba umzimba.’
Ngeli xesha, amabhinqa athile angabahlobo bakaYesu eza engcwabeni. Othuka gqitha akulifumana lize! Ngequbuliso kubonakala iingelosi ezimbini zinxibe impahla eqaqambileyo. Zithi kula mabhinqa: ‘Kutheni nimkhangela apha nje uYesu? Uvusiwe. Khawulezani niye kuxelela abafundi bakhe.’ Hayi indlela abaleka ngayo la mabhinqa! Kodwa endleleni amiswa yindoda ethile. Ngaba uyazi ukuba ingubani? NguYesu! Uthi: ‘Hambani niye kuxelela abafundi bam.’
Xa la mabhinqa exelela abafundi ukuba uYesu uvukile, nokuba ambonile, abafundi bakufumanisa kunzima ukukukholelwa oku. UPetros noYohane babaleka baye engcwabeni ukuze bazibonele ngokwabo, kodwa ingcwaba lize! Xa uPetros noYohane behamba, uMariya Magadala ushiyeka ngasemva. Elo lixesha akroba ngalo aze abone iingelosi ezimbini.
Uyazi na ukuba kwakwenzeke ntoni kumzimba kaYesu? UThixo wawenza wathi shwaka. UThixo akazange amvuse uYesu enomzimba wenyama awayefe enawo. Wamnika umzimba omtsha womoya, ofana nalowo zinawo iingelosi zasezulwini. Kodwa ukubonisa abafundi bakhe ukuba uvukile, uYesu wambatha umzimba onokubonwa ngabantu, njengokuba siza kufunda.
Ngubani lo mfazi usemfanekisweni, engoobani wona la madoda mabini, yaye aphi?
Kutheni uPilato exelela ababingeleli ukuba bathumele amajoni ukuya kulinda ingcwaba likaYesu?
Yenza ntoni ingelosi kwakusasa ngomhla wesithathu emva kokufa kukaYesu, kodwa benza ntoni ababingeleli?
Kutheni abanye abafazi besothuka xa beﬁka engcwabeni likaYesu?
Kutheni uPetros noYohane bebaleka ukuya engcwabeni likaYesu, yaye balifumana linjani?
Kwenzeka ntoni kumzimba kaYesu, kodwa yintoni ayenzayo ukuze abonise abafundi bakhe ukuba uyaphila?
Funda uMateyu 27:62-66 nesama-28:1-15.
Ngexesha lokuvuswa kukaYesu, ababingeleli abaziintloko, abaFarisi, namadoda amakhulu ona njani nxamnye nomoya oyingcwele? (Mat. 12:24, 31, 32; 28:11-15)
Ingxelo engokuvuswa kukaYesu ibonisa njani ukuba uYehova uwagqala amabhinqa njengamangqina athembekileyo? (Luka 24:4, 9, 10; Mat. 28:1-7)
Funda uYohane 20:1-12.
UYohane 20:8, 9 usinceda njani sibone imfuneko yokuba nomonde xa singasiqondi ngokupheleleyo isiprofeto esithile seBhayibhile? (IMize. 4:18; Mat. 17:22, 23; Luka 24:5-8; Yoh. 16:12)
Iinyani eziseBhayibhileni ezintandathu zisichazela indlela ukufa kwendoda enye okuzisela abantu abaninzi ubomi.